သျှင်နေမင်း: March 2011
တကယ်လို့သာ ဆုတောင်တိုင်းပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဟန်ဆောင်မှုတွေကင်းမဲ့၊လှည်စားမှုတွေကင်းမဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုးနှင့်သာ ဆုံဆည်းရလိုပါ၏.........။။
မှတ်ချက်။ ။ခံစားချက်များနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ ကဗျာလေးမျာဖြစ်ပါတယ်.....
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:43 AM
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်က မိုးသည်းသည်းမည်းမည်း ရွာတဲ့ညတစ်ညမှာ
မိဘဆွေမျိုးတွေကို ဆန့်ကျင်ပြီး သိပ်ချစ်ရတဲ့နင့်နောက် ငါလိုက်ခဲ့တယ်။
နင့်မှာ ဖျားနာနေတဲ့ မိခင်ရယ်၊ အိုမင်းနေတဲ့ ဖခင်နဲ့
သွပ်တစ်ခြမ်းခွါရောင်းထားတဲ့ အိမ်အိုတစ်လုံးအပြင် ငါရှိခဲ့သေးတယ်
မဟုတ်လား? ဒီမြို့ကို အလုပ်လုပ်ဖို့ လာခဲ့တဲ့ ခရီးစရိတ်အတွက်
ငါအစားထိုးဆရာမ တစ်လလုပ်ခဲ့ရတယ်။ ငါအပင်ပန်းခံခဲ့သမျှက နင်နဲ့အတူ
ငါလူရွေးမမှားခဲ့ဘူးလို့ပဲ ပြောရမယ်။ နင်အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
၁၀နှစ်လွန်သွားတော့မှ ငါ့အိမ်ကလူတွေ ငါ့အတွက် သက်ပြင်းချနိုင်ခဲ့တယ်။
ငါ့မိဘတွေ ငါလူရွေးမမှားခဲ့မှန်း သိပြီး ခွင့်လွတ်တဲ့အချိန်မှာ တိုက်တွေ၊
ကားတွေ ငါတို့ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီလေ။ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လာသလို
နင့်မှာ “နှလုံးသားချင်း နားလည်တဲ့သူ” နောက်တစ်ယောက်ရှိလာတယ်လို့
နင်ငါ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောလာခဲ့တယ်။ ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ
ငါလက်မှတ်ထိုးပေးရင် ပိုင်ဆိုင်သမျှနဲ့ ကလေးတွေ ငါ့ကိုပေးမယ်လို့
ငါရယ်ပြီး နင့်ကို နောက်၃ရက်နေမှ အဖြေပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
၄ရက်မြောက်နေ့မှာ အချက်အလက်တွေခွဲပြီး ငါရေးထားတဲ့ စာရင်းစာရွက်
(၁) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ည၀တ်အင်္ကျီ ၃စုံ၊ အိမ်နေစီး ဖိနပ် ၄ရံနဲ့
သားရေဖိနပ် ၂၁ ရံ နင်စီးခဲ့တယ်။ သားရေဖိနပ် အရေအတွက်က ပိုများနေတယ်။
အကြောင်းက ငွေရှာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အပြင်မှာပဲ
နင်အနေများခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်လည်း “နှလုံးသားချင်း နားလည်တဲ့သူ” နဲ့
(၂) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ည၀တ်အင်္ကျီ ၁၀စုံ၊ အိမ်နေစီးဖိနပ် ၁၁ရံနဲ့
သားရေဖိနပ် ၁၆ရံ ငါစီးခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့အိမ်နေစီးဖိနပ်ရော သားရေဖိနပ်ရော
များခဲ့တယ်။ မိသားစုတာဝန်နဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီး အိမ်မှာပဲ
ငါအနေများခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ နင်နဲ့အတူ အပြင်ထွက်ပြီး ဒိုးတူပေါင်ဖက်
ငါတို့ရုန်းခဲ့တဲ့အချိန်လည်း ရှိတာပဲ။ ပင်ပန်းတဲ့ဒဏ်ကြောင့်
လတ်ဆတ်မှုမရှိတော့တဲ့ ငါ့ရုပ်ရည်က နင့်အတွက် အိမ်မှာသိမ်းထားဖို့ပဲ
(၃) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ နင့်အရည်အချင်းတွေ xဆ တက်ခဲ့တယ်။
ကွာရှင်းပြီးတဲ့နောက် “အဖက်ဖက်မှာ အောင်မြင်ပြီး ရင့်ကျက်နေတဲ့”
နင့်ကိုယူဖို့ တန်းစီစောင့်နေတဲ့ မိန်းမတွေထဲမှာ ကြိုက်တဲ့တစ်ယောက်ကို
(၄) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ငါ့ရုပ်ရည်၊ ငါ့ဖျတ်လတ်မှုတွေ အဆတစ်သောင်း
ထိုးကျသွားတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုဖို့ ငါ့အတွက်
အခွင့်အရေးက ၁% ပဲရှိတယ်။ ငါ့နဲ့ရွယ်တူကို ငါမယူနိုင်တော့သလို
ကလေးတွဲလောင်းနဲ့ တခုလပ်မကို ဘယ်ယောက်ျားကများ ယူချင်မလဲ?
(၅) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ အလုပ်များတဲ့နင် ငါ့ကို ထမင်း၂၆ခါ ချက်ကျွေးဖူးတယ်။
(၆) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ အလုပ်များတဲ့ငါ နင့်ကို ၃၆၅ရက်လုံးလုံး တစ်နေ့
(၇) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖို့ ငါ၁၀လအချိန်ယူခဲ့တယ်။
မွေးဖွားပြီး ၁၀နှစ်လောက် ငါပြုစုစောင့်ရှောက် ပျိုးထောင်ခဲ့ရတယ်။
(၈) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီး နာမည်မှည့်ပေးဖို့ နင်
(၉) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ နင့်မိဘတွေနဲ့ ငါသင့်မြတ်အောင် နေခဲ့တယ်။
နင့်မိဘတွေကို ငါဘယ်တော့မှ စကားကျယ်ကျယ် မပြောခဲ့ဖူးဘူး။
(၁၀) အိမ်ထောင်သက် ၁၀နှစ်မှာ ငါ့ကိုချစ်တဲ့ ငါ့မိဘတွေကို နင်လုံးဝ
ခွင့်မလွတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အဖေ၊ အမေလို့လည်း နင်တစ်ခွန်းမှ မခေါ်ခဲ့ဖူးဘူး။
နင်ဆင်းရဲသား ဘ၀တုန်းက သူတို့ကိုခေါ်ရင်လည်း ပြန်မထူးမှာစိုးလို့
နင်မခေါ်ခဲ့သလို ချမ်းသာလာလည်း နင်သူတို့ကို အရေးလုပ်ပြီး မခေါ်ခဲ့ဘူး။
နင်လည်း နင့်သမီးကို ချမ်းသာတဲ့လူနဲ့ပဲ ရစေချင်တယ် မဟုတ်လား?
ငါရေးထားတဲ့ စာရင်းတွေကို ဖတ်ပြီး ငါရှေ့မှာ ကွာရှင်းပေးပါလို့
ငါမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး နင်ပြောခဲ့ရင် ကွာရှင်းစာချုပ်မှာ အချိန်မရွေး
ဒီလိုနဲ့ပဲ နင်ပြောလာမယ့်ရက်ကို ငါ၃နှစ်ကျော်စောင့်ခဲ့တယ်။ ငါပေးတဲ့စာကို
ကြည့်ပြီးကတည်းက ကွာရှင်းဖို့ နင်လုံးဝ မဟတော့တဲ့အပြင် အိမ်စောစော
ပြန်လာတတ်တယ်။ အိမ်အလုပ် ကူလုပ်လာတယ်။ လုပ်ခဲ့မိတဲ့အမှားတွေအတွက်
အပြစ်တွေကို နင်ပေးဆပ် နေတာလား? ဘာကြောင့်လဲ?
Posted by သျှင်နေမင်း at 9:32 AM
ငါရင်ထဲ့ ပုံရိပ်တချို့ 
အသောအချာ သော့ ခတ်.....။ ။
မှောင်မှောင်နဲ့ မဲ မဲ
ထည့် ထားလိုက်မယ်.....။ ။
မင်းပုံရိပ်တွေနဲ့ ပြည်နှပ်နေဆဲပါပဲ...။ ။
ဘာလုပ်ရမလဲ...ဆိုတဲ့ အတွေးများနဲ့ 
Posted by သျှင်နေမင်း at 9:14 AM
chris medina ဆိုထားတာပါ...
American idol ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်ပါ....
..........What Are Words........
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:38 AM
ထိန်းသိမ်းထားတဲ့စိတ်တွေနဲ့ 
စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ အရာပါ........။ ။
အံဝင်ခွင်မကျတဲ့မြို့ ပြတွေကိုစွန့် ခွာ
မြို့ ပြသစ်တွေတည်ဆောက်ပေမယ့် 
ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့မြို့ ပြသစ်ပေါ့ .......၊ ။
နာကျဉ်းမှုတွေ စုစည်းထားတဲ့ 
မြို့ ထဲ ပေါက်ကွဲလုဆဲဆဲ............။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:50 AM
အသက်ပေး၍ ၀ယ်ရသည်........။ ။
[ ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာခေါ်ဆိုခဲ့ အိမ်... ရံရွေလယ်ထည်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်း အိမ်...
ကျူထရံတွေကာရံကာ ဓနိမိုးအိမ်... နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးရင် ဒါဟာလည်း အိမ်...]
ကမ္ဘာမြေမှာ ခိုလှုံရာခေါ်ဆိုခဲ့ အိမ်... ရံရွေလယ်ထည်ဝါစွာ ဆင်စွယ်နန်း အိမ်...
ပိုင်ဆိုင်ရာ တွယ်တာရာ ဒီရင်သွေးတွေ... ဆည်းလည်းသံ လှိုက်ခတ်စေ ဒီချစ်ခြင်းတွေ...
ကမ္ဘာမြေမှာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ဆောက်ကြမယ်လေ
ကမ္ဘာမြေမှာ ညင်သာစွာ စီးဆင်းဖို့လေ...]
အိမ်အပြင်မှာ ဝါပင်တွေ ကိုယ်တိုင်စိုက်မယ်
ကိုယ်တိုင်ထွန် ဝါချည်မျှင် ဖျင်တဘက်ရယ်...
အိမ်အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ထွန် ကိုယ်တိုင်စိုက်တဲ့
စပါးရိပ်ချိန် ဝိုင်းဖွဲ့မယ် ဆန်အရက်ရယ်...
ရင်ခွင်မှာ ကြင်နာသူ ချိုအနမ်းရယ်...
ရင်ခွင်မှာ ရှင်သန်ရာ ခိုမှီရာ အိမ်တစ်အိမ်ကို ကမ္ဘာမြေမှာ တည်ဆောက်ကြမယ်
အဆောင်အယောင်တွေ မဆင်ရင်စေ... ရင်ခွင်အိမ်ပျော်ရွှင်ပါစေ...
ဒဏ္ဍရီရာဇဝင်လို ဝိညာဉ်အိမ်... စိန်စီရာ ရတနာခြယ် သိင်္ဂါရီအိမ်
တစ္ဆေတစ်ကောင် ဟန်ဆောင်သလို မာယာကင်းမဲ့
မနာလိုတဲ့ မစ္ဆရိယ ချည်နှောင်မှုမဲ့
ကံစီရင် ယုံကြည်စွာ ကမ္ဘာမြေမှာ...
ရဲရင့်လိုက် ချစ်တဲ့အိမ် တို့ဆောက်ကြမယ်
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:18 AM
ငါမာန နဲ့နင့် ဘ၀ကို
နင်နဲ့ မှ ကြွေကွဲနေရပြီ...
နင်နဲ့ မှ ရင်ကွဲနာကျ
မချစ်လည်းနေဟ ..လို့ .....
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:54 AM
ဆေးခန်းပိတ်ပြီး အိမ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်နေတုန်း ည
၉နာရီလောက်မှာ ကျွန်တော့် ဆေးခန်းတံခါးကို ကသောကမြော ခေါက်သံ
ကြားလိုက်ရပါတယ်.. ဆေးခန်းတံခါး လာခေါက်သံတွေထဲမှာ အခုလောက် အရေးတကြီး
ကသုတ်ကရက် နိုင်တဲ့ တံခါးခေါက်သံမျိုး ကျွန်တော် တစ်ခါမှ
“ ၀င်ခဲ့ပါ.. ၀င်ခဲ့ပါ.. ” ကျွန်တော် စိတ်မရှည်စွာ တုံ့ပြန်လိုက်မိပါတယ်.. အခန်းတံခါး ဆွဲဖွင့်သံကြားလိုက်ပြီး တံခါးဝမှာ
ပေါ်လာတာက အသက် ၉နှစ်ထက် ဘယ်လိုမှ ကြီးမဲ့ပုံ မရတဲ့ ကောင်မလေး.. ကြည့်ရတာ
ထိတ်ထိတ်လန့်လန့် တုန်တုန်ရီရီနဲ့.. မျက်နှာတစ်ခုလုံး
ဖြူဖွေးဖျော့တော့လို့.. မျက်လုံးလေးတွေကလဲ ရီဝေညှိုးငယ်စွာနဲ့..
“ တောင်းပန်ပါတယ် ဆရာရယ်.. သမီး အမေ အသည်းအသန် ဖျားနေလို့ပါ.. သူဟာ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေပါတယ်.. အမေ့ကို ကယ်ပါဦး ဆရာရယ်.. အိမ်ကို လိုက်ပြီး
“ဆရာရယ် အမေက ဘယ်လိုမှ မထနိုင်လို့ပါ.. ဆရာသာ လိုက်မကြည့်ဘူးဆိုရင် သမီးအမေ သေရပါတော့မယ်.. သမီးကို သနားသဖြင့်လိုက်ကြည့်ပေးပါ ဆရာရယ်.. သမီး
ကလေးမလေးရဲ့ မျက်ဝန်းထဲမှာ မျက်ရည်ဥလေးများ တစ်လိမ့်လိမ့် ကျဆင်းလာရင်း နှုတ်မှလည်း အဆက်မပြတ်
တိုးလျှိုးတောင်းပန်သံလေးက သနားစဖွယ်.. ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲက ကြင်နာ
သနားစိတ်တွေ ယိုဖိတ်လာတာနဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ အိမ်ကို လိုက်သွားကြည့်ဖို့
ဆေးအိတ်ကို ကောက်ကိုင်လိုက်ရင်း ကလေးမလေးကို ရှေ့ကနေ လမ်းပြဖို့ပြောလိုက်တော့ ၀မ်းသာစိတ်နဲ့ လက်ခနဲဖြစ်သွားတဲ့
သူမရဲ့မျက်လုံးလေးတွေက ချစ်စရာ… ကလေးမလေးက ဦးဆောင်ပြီး သူမအိမ်ရှိရာ လမ်းအတိုင်း
လျှောက်လာကြပါတယ်.. ၁၀ မိနစ်ခန့် လျှောက်လာပြီးနောက် အိမ်ကလေး တစ်လုံးရှေ့
အရောက်မှာ အိမ်တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို အရင်ဝင်စေပါတယ်..
ကျွန်တော် အိမ်ထဲကို ရောက်သွားချိန်မှာ အိပ်ရာ ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးထက်မှာ
လှဲလျောင်းနေတဲ့ လူနာကို တွေ့လိုက် ရပါတယ်.. တော်တော်လေးကို နေမကောင်း
ဖြစ်နေပုံပါ.. တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ခြစ်ခြစ်တောက် ပူကျစ်နေပါတယ်.. လူနာဟာ
သူ့လက်ကိုတောင် အပေါ်မြှောက်နိုင်တဲ့ အင်အားမရှိတော့ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ လူနာရဲ့
မျက်လုံးတွေက ဆရာဝန် ရဲ့ အကူအညီကို အသည်းအသန် လိုအပ်နေကြောင်းကို
ဖော်ပြနေတယ်.. သူမကို ကယ်တင်ဖို့ တောင်းပန်နေတဲ့ အရိပ်အယောင် တွေကိုလဲ
ကျွန်တော် လူနာအမျိုးသမီးကို လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုကို ပေးဖို့ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက် ပါတော့တယ်.. ထူးဆန်းတာက ခုနက ကျွန်တော့်ကို
တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ လာခေါ်တဲ့ ကလေးလေးကို လုံးဝ ထပ်မတွေ့ရတော့ပါဘူး…
တစ်အိမ်လုံးမှာလည်း အခြားအိမ်သား တစ်ယောက်တစ်လေကိုမှ ကျွန်တော်
မတွေ့မိပါဘူး.. တကယ်လို့ ဒီညသာ ကျွန်တော် ရောက်မလာဘူးဆိုရင်
လူနာအမျိုးသမီးဟာ အသက် ဆုံးရှုံးကောင်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်.. သူ့အဖျားက
အတော်ကို စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ.. အဖျားကျအောင် တစ်ညလုံးနီးပါး
ကျွန်တော် ကြိုးစားပမ်းစား ကုသလိုက်ရပါတယ်.. မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ လူနာဟာ
စိတ်ချရတဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာပါတယ်.. ကျွန်တော်က လူနာအမျိုးသမီးကို
အိမ်ပြန်တော့မဲ့အကြောင်းနဲ့ ညနေပိုင်းလောက်မှ တစ်ခေါက်
ပြန်လာကြည့်မဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်… ပြီးတော့ ဆေးအိတ်ကို ဆွဲပြီး
ညနေပိုင်း ဆေးခန်းမဖွင့်ခင် လူနာအိမ်ကို ကျွန်တော် ပြန်ရောက်သွားပြီး လူနာကို လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါတယ်.. တော်တော်လေး အခြေအနေ
ကောင်းသွားပါပြီ.. ခုတော့ လူနာဟာ စကားလဲ ကောင်းမွန်စွာ ပြောနိုင်တဲ့
အနေအထား ရောက်နေပါပြီ.. တစ်ညလုံး ကုသပေးခဲ့တဲ့ အတွက် လူနာက ကျွန်တော့်ကို
ကျေးဇူးစကား အထပ်ထပ်ဆိုပါတယ်.. ကျွန်တော်က ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်..
“ တကယ်လို့ ကလေးမလေးသာ လာမခေါ်ရင် အဒေါ်ဟာ သေတောင် သေသွားနိုင်ပါတယ်.. သူ့ရဲ့ သနားစရာ တောင်းပန်မှု ကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော် ဒီကို ရောက်လာစရာ
အကြောင်းမရှိပါဘူး… သိပ်လိမ္မာ သိတတ်တဲ့ ကလေးလေးပါဘဲဗျာ.. မိဘအပေါ်
သိပ်သိတတ်တဲ့ ဒီလို ကလေးမျိုး မွေးထားရတာ အဒေါ်ဘယ်လောက်များ
ကျွန်တော့စကားကြားတဲ့ လူနာအမျိုးသမီးရဲ့ မျက်နှာပြင်မှာ အပြောင်းအလဲများစွာနဲ့ အံ့သြတဲ့ အရိပ်အယောင်များ ဖြတ်ပြေးသွားပါတယ်..
အချိန်အတော်ကြာအောင် တိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့မှ စကားသံ ထွက်လာပါတယ်..
“ဆရာ.. ကျွန်မသမီးလေးက ဆုံးသွားတာ ၃နှစ်တောင် ရှိပါပြီ.. ဟိုနံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့
ပုံဟာ သမီးလေးပုံပါ… ဆရာ ကျွန်မသမီးလေးကို သိလို့လားဟင်.. ”
ကျွန်တော် ထိုင်ရာက ထပြီး နံရံမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံအနီးကို တိုးကပ်ပြီး သေချာအောင် ကြည့်လိုက် မိပါတယ်.. သေချာပါတယ်.. ဒီကလေးမဟာ
မနေ့ညက ကျွန်တော့ဆေးခန်း တံခါးကို ခေါက်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ဒီရောက်အောင်
ခေါ်လာတဲ့ကလေးမလေးပါဘဲ.. ဒီရုပ်လေးကို ကျွန်တော်မှားစရာ အကြောင်းမရှိပါ..
ထူးဆန်း အံ့သြစိတ်တွေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုကင်းမဲ့စွာ ဓာတ်ပုံရှေ့မှာ အကြာကြီး
ရပ်နေမိပါတယ်.. ပြီးတော့ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစားနေမိတယ်.. မနေ့ညက
တံခါးခေါက်သံဟာ ခုချိန်ထိ သူ့အာရုံမှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရှိနေတုန်း ပါ..
သူ့ကို ကလေးမလေးဟာ ဒီနေရာထိအောင် ခေါ်လာတယ် ဆိုတာလဲ သူ့အနေနဲ့ မမှတ်မိစရာ
အင်း… ဒါဟာ မေတ္တာတရားရဲ့ ထူးခြားဆန်းကျယ်မှုဘဲ ဖြစ်မှာပါ.. ခေါင်းကို တစ်ဆတ်ဆတ် ငြိမ့်မိရင်း ကျွန်တော် တစ်ချက် ပြုံးလိုက်မိပါတယ်..
အဒေါ်ကြီးကိုတော့ ကလေးမလေး အကြောင်း ဘာမှ ထပ်မပြောမိတော့ပါဘူး..
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ သိပ္ပံပညာက လိုက်မမီတဲ့ အရာတွေဟာ ဒီလောကကြီးထဲမှာ
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် ထူးခြားဆန်းကျယ် လေးနက်တဲ့ မေတ္တာရဲ့ သဘောတရားကို ဖော်ပြနေပါတယ်.. မိဘက သားသမီးအပေါ် ထားတဲ့ မေတ္တာဟာ အတုမရှိ
လေးနက်သလို သားသမီးက မိဘအပေါ်ထားတဲ့ အချစ်ကလဲ နက်ရှိုင်းကျယ်ဝန်း လှပါတယ်..
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ သေသွားပြီး တာတောင်မှ မိဘအပေါ် ကူညီစောင့်ရှောက်နေသေးတဲ့
သမီးလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အံ့သြ ဆန်းကျယ်တဲ့ မေတ္တာစိတ်ကလေးကို စာဖတ်သူများ
သတိပြုမိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်..
(သူငယ်ချင်းတယောက် share ပေးထားတာပါ )
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:02 AM
မင်းနဲ့ ငါကြား အေးခဲသွားတဲ့ 
ကဗျာတပုဒ်ကို ငါမဟုတ်တဲ့ 
ငါဆိုတဲ့ဒီကောင်ဟာ
ရှေ့ လျောက်မရသေးတဲ့ ကောင်ပါ......
Posted by သျှင်နေမင်း at 6:41 AM
သူတို့ ရဲ့ အနာဂတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ ဘ၀နဲ့ စာနာနားလည်ပေးနိင်ပါစေ....
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:16 AM